Raad Raac News Online – AMISOM “Waan Canbaaraynaynaa Weerarkii Lagu Qaaday Axmed Madoobe”
AMISOM “Waan Canbaaraynaynaa Weerarkii Lagu Qaaday Axmed Madoobe”
Editors Chief September 12, 2013
Muqdisho:- mahamat Saleh Annadif oo ah wakiilka gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu si weyn ugu canbaareeyey weerarkii is miidaaminta ahaa ee maanta magaalada kismaayo dhexdeeda lagu fuliyay madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Madoobe .
“Dareen kayagu wuu kacsan yahay , waxaanu ka xunahay dhibaatada ka socota somalia oo ay ka wadaan al-shabaab iyo kuwo kale oo la mid ah , waan ka xunahay qarixii lala eegtay axmed madoobe, waxaana ballan qaadayaa in aanu sii xoojin doono taageerada umada somaliyed ” Sidaas waxaa yiri danjire Annadif.
Waxa uu sidoo kale u tacsiyeeyey ehelada dadkii wax ku noqday qaraxaasi wuxuuna ku baaqay in xaaldooda caafimaad lala tacaalo dadka dhaawacyada ah ee qaraxaasi wax ka soo gaareen.
Annadif waxa uu caddeeyey AMISOM in ay ku dhiiran doonto taakulaynta iyo taageerida dowlada somalia iyo ciidanka qalabka sida isla markaana lasii xoojin doono taba barada iyo xeeladaha ciidan ee la siiyo ciidamada aduunka.
Xafiiska Wararka -Muqdisho